Haweenay markii u horraysay hoggaanka u qabatay CIA - BBC News Somali
Image caption Haspel ayaa masuul ka ahaan jirtay xarun lagu jirdili jiray dadka argagixisada looga shakisan yahay
Senate-ka Maraykanka ayaa markii u horraysay haweenay u idmaday in ay hogaamiso hay'adda sirdoonka Maraykanka ee CIA, inkastoo ay door ku soo yeelatay barnaamij ay hay'addani fulisay 9/11 oo dadka lagu baarijiray.
Mike Pompeo oo hogaaminayay hay'adda sirdoonka Maraykanka ee CIA ayaa xilka banneeyay si uu u noqdo Wasiirka Arrimaha Dibadda.
Xubnahaas waxaa ka mid ah Mark Warner oo laga soo doorto Virginia wuxuuna sheegay in Haspel ay u sheegtay in aysan ahayn in hay'addu ay adeegsato xeeladihii ciqaabta ahaa ee ay u adeegsatay dadkii ay baaritaanka ku haysay.
Maraykanka oo laga yaabo in uu shirkaddaha u ogolaado maalgashiga Kuuriyada Waqooyo
"Waxaan rumaysanahay in ay tahay shaqsi ku dhiiran karta in ay madaxweynaha hor istaagto oo ay runta u sheegto haddii uu madaxweyne uu ku amro in ay samayso wax sharci darro ah ama aan wanaagsanayn". ayuu yiri Mark
Haspel oo 61 jir ah ayaa hay'addan ka soo shaqaysay 33 sano, inta badan nolosheedana si qarsoodi ah ayay u soo shaqaynaysay.